९२ वर्षमा विश्वचर्चित बनेका गायक: जसको गीत ८ करोडले हेरे, दर्जनौं भर्सन बनाइए- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
९२ वर्षमा विश्वचर्चित बनेका गायक: जसको गीत ८ करोडले हेरे, दर्जनौं भर्सन बनाइए
माघ ७, २०७८ एजेन्सी
काठमाडौँ — मलावीका गायक तथा संगीतकार गिडेस चलामान्डालाई टिकटक के हो थाहा छैन । उनलाई आफ्नै स्मार्टफोनबारे पनि धेरै जानकारी छैन । तर उनै ९२ वर्षीय गायक केही समययता टिकटकमा भाइरल बनेका छन् ।
टिकटकसँगै सामाजिक सञ्जालमा उनी स्टारको रुपमा अत्याधिक चर्चामा छन् । यतिसम्म कि पछिल्लो केही महिनाको अन्तरालमा गायक गिडेसको गीत 'लिन्नी हू' टिकटकमा ८ करोडभन्दा धेरैले अवलोकन गरिसकेका छन् ।
छोटो समयमै दक्षिण अफ्रिकादेखि फिलिपिन्ससम्म उनको उक्त गीतका रिमिक्ससमेत बनाइएको छ । 'उनीहरू आए र मलाई मोबाइलमा भिडियो देखाए । तर मलाई थाहा छैन यसले कसरी काम गर्छ,' चालामान्डाले एएफपीसँग भनेका छन् ।
चलामान्डा आफ्नो प्रतिभाले उचित न्याय पाएको ठान्छन् । उनले भने, 'तर मलाई मन पर्‍यो कि मानिसहरू मेरो प्रतिभा हेरेर रमाइरहेका छन् ।' ७० वर्षदेखि संगीतमा सक्रिय चलामान्डको कपाल सेतै फूलेको छ । शरीर कुप्रो परेको छ । यद्यपि यी पुराना गायकका करोडौं युवा प्रशंसक बनिसकेका छन् ।
उनले २००० मा पहिलो पटक आफ्नी छोरीका लागि गीत 'लिन्नी' रेकर्ड गराएका थिए । त्यसबेला यस गीतले खासै चर्चा पाएन । त्यसको २० वर्षपछि २०२२ मा सोही गीतले एकाएक विश्वव्यापी प्रशंसा पाएको छ ।
तर यसका लागि युवा कलाकारहरूले चलामान्डासँग मिलेर 'लिन्नी'लाई 'लिन्नी हू' को नाममा रेगी रिमिक्स तयार पारेका हुन् । भिडियोमा चलामान्डा हाँसिरहेका देखिन्छन् । सेतो सर्ट र भी आकारको स्वेटरमा सजिएका उनी घर अगाडिको रुखमुनि बसिरहेका देखिन्छन् ।
यसरी नयाँ रुपमा तयार भएको उक्त गीत युट्युबमा राखिएको थियो । त्यसपछि रातारात गीत भाइरल बनेको हो । गत वर्षको अन्त्यतिर उक्त गीत टिकटकमा राखेपछि विस्तारै विश्वव्यापरु रुपमा फैलिएको हो ।
आफ्नो गीत लोकप्रिय बन्दैगएपछि चलामान्डाले आफ्ना सन्तान र साथीहरूबाट सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियताबारे थप जानकारी लिए । यसपछि उक्त गीतका दर्जनौं भर्सन सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
दक्षिणी मलावीको एउटा सानो सहर चिराडजुलुमा जन्मेका चालमान्डाले 'बफेलो सोल्जर' जस्ता गीत पनि गाएर पनि प्रसिद्धि हासिल गरेका छन् । जसबाटै उनी पछिल्लो समय अमेरिका भ्रमण गर्ने सपना देख्दैछन् । यसबीचमा उनले थुप्रै युवा संगीतकारहरूसँग मिलेर काम गरिसकेका छन् ।
हाल टिकटक डान्स गर्नेहरूले उनको 'लिन्नी हू' का अनेक भर्सन तयार पारेर भिडियो अपलोड गर्ने क्रम व्यापक छ । उनको देशमा र बाहिर पनि उक्त गीत अधिकांश क्लब र मेला महोत्सवमा घन्किरहेको हुन्छ ।
चलामान्डाले आफ्नो जीवनमा दुई विवाह गरे । १४ सन्तानमध्ये लिन्नी (जसको नाममा लिन्नी गीत गाए )सहित ७ सन्तान जीवीत छन् । चलामान्डाकी छोरी लिन्नीका १६ वर्षीय छोरा स्टेपसन अस्टिन आफ्नो हजुरबाप्रति गर्व गरेको प्रतिक्रिया दिन्छन् । 'मैले संसारभर मानिसहरूलाई नाच्न सिकाएँ । यसर्थमा म उत्साही छु । तर यसबाट मलाई पनि केही फाइदा हुनुपर्छ । मलाई पैसा आवश्यक छ,' चलामान्डाले भने ।
प्रकाशित : माघ ७, २०७८ १५:१३
लकडाउन हैन, व्यवसाय चलाउन देऊ : व्यवसायी
काठमाडौँ — कोरोना संक्रमित बढ्दै जाँदा लकडाउन हुने डरमा रहेका व्यवसायीले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताएका छन् । विगतमा सरकारले गरेको लकडाउनले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारेको भन्दै उनीहरुले अब कोरोनासँगै जुधेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहजता प्रदान गर्नुपर्ने माग गरे ।
पर्यटन व्यवसायी निलहरी बास्तोलाले अब राज्यले भरोसा नदिएको खण्डमा मजदुर र व्यवसायीहरु आफ्नो पेशाबाटै पलायन हुने अवस्था आउने बताए । उनले भने, 'निश्चित समपछि समयमा कोरोनाको अर्को भेरियन्ट आउला, त्यसले अर्को २ वर्ष लैजाला । निषेधाज्ञा नै गरेर, लकडाउन नै गरेर घरमै राखेर त हामी कतै पनि पुग्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन ।'
राज्यले व्यसायीहरुलाई निश्चित समयमा तिर्नेगरी न्यूनतम ब्याजमा ऋण दिलाइदिनुपर्ने उनले माग गरे । उनले भने, 'राज्यले हामी छौं भनेर बोलिदिनु पर्ने बेला आइसकेको छ । ढिलो गरे पर्यटन व्यवसायी र मजदुरहरु विस्थापित हुन सक्छन् ।'
त्यस्तै यती एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले खोपकार्ड हेरेर मात्रै विमानमा चढ्न दिने भन्ने निर्णय अव्यवहारिक भएको बताए । उनले यो निर्णय व्यवहारमा उतारेर कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । कतिपयले खोप नै नपाएको अवस्था भएकाले सरकारले यस्ता निर्णयलाई सच्याएर सहजतापूर्वक काम गर्ने वातावरण मिलाइदिनु पर्ने उनको भनाइ छ । 'अहिलेसम्म ३५/४० प्रतिशतले मात्रै खोप लगाएका छन् । बाँकी ६५ प्रतिशतले जहाज चढ्न पाउने कि नपाउने ? १८ वर्ष मुनिकाले खोप लगाइसकेको अवस्था छैन । अभिभावकले सँगै ल्याएका बच्चालाई चढ्न दिने कि नदिने ?' उनले प्रश्न गरे । एयरपोर्टमा कार्ड हेरेपछि त्यसको रेकर्ड राख्ने सिस्टम समेत नभएको उनले बताए ।
त्यस्तै होटल संघका उपाध्यक्ष विनायक शाहले सरकारले जारी गरेको निर्देशनमा नियन्त्रणको कुरा मात्रै भएको तर कोरोनासँगै अर्थतन्त्र अघि बढाउने रणनीति नरहेको बताए । उनले भने, 'होटल, पर्यटन क्षेत्र केही हिसावले लयमा आउँदै थियो । तर तेस्रो चरण आएपछि एकदम अन्योलता छ । मान्छेको आत्मविश्वास घटेको छ ।' सरकारले नियन्त्रण मात्रै गर्न खोज्दा सर्वसाधारणको रोजीरोटी, व्यवसाय, जीवनयापन पनि हेर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, 'रोग पनि छ भोक पनि छ । सबै कुरा बन्द हुँदा मान्छेले के खान्छ त ? एउटा ठूलो जमात बिहान काम गरेर बेलुका खाने छ । हामी व्यवसायीहरुको जीवनयापन सरकारले हेरेकै छैन ।'
प्रकाशित : माघ ७, २०७८ १५:११
फेरि आउँदै ‘के घर के डेरा’
धनगढी मिस नेपाल अडिसनमा १२ सहभागी